AmaGreycale Partner kunye neCoinDesk yokuSungula iNgxowa-mali yeDeFi
Ukuhlaziywa: 19 Julayi 2021
Oyena mphathi wempahla ye-cryptocurrency inkulu emhlabeni, iGreycale Investment, ubhengeze ukuba usebenzisana neCoinDesk Indexes ukumilisela iNgxowa yeGrayscale DeFi.
Umrhumo wamva nje ovela kwingxowa-mali enkulu yotyalo-mali uza kuvumela abathengi ukuba babhence kwimveliso yezorhwebo eyandayo (DeFi). Ingxowa-mali yeGreycale DeFi iya kuba yimveliso yeshumi elinesihlanu yenkampani kunye nengxowa-mali yayo yesibini eyahlukeneyo kwindawo ye-cryptocurrency. Ngokwesibhengezo esisemthethweni, ingxowa-mali iya kubandakanya "Inkqubo ekhokelayo yeDeFi ngokusebenzisa ipotifoliyo enesiseko sentengiso esenzelwe ukulandela umkhombandlela weCoinDesk DeFi Index."
Ehlomla ngolu phuhliso lutsha, iGreycale Investment CEO uMichael Sonnenshein uthe inkampani izakuqhubeka nokujonga amathuba okufumana abatyali mali. Sonnenshein uqaphele ukuba:
“Ukuvela kwemigaqo-nkqubo yokwabela abaphantsi amagunya kwezemali kunika imizekelo ecacileyo yetekhnoloji enokuthi ichaze ikamva leshishini leenkonzo zezezimali. Siyazingca ngokunika abatyali-mali ithuba lokufumana ulwazi kwi-DeFi ngokusebenzisa iGreycale ethembekileyo, ekhuselekileyo kunye nemveliso ekhokelayo kwimizi-mveliso. ”
Inkampani yotyalo-mali iza kusebenzisana neCoinDesk ukubonelela ngesalathiso seDeFi kwingxowa mali. Isalathiso siza kuseta ukubonakaliswa kwebenchmark yeeprotocol zeDeFi. Isalathiso siyakuba ne-capitalisation yentengiso kunye nokuthengiswa kwemali kwiiprojekthi zangoku zeDeFi.
Iiprojekthi zeDeFi Okwangoku kwiNgxowa-mali ye-Grayscale DeFi
Okwangoku, iNgxowa-mali yeDeFi ineeprojekthi ezilishumi zeDeFi, kubandakanya i-Uniswap, Aave, Compound, Curve, MakerDAO, SushiSwap, Synthetix, Yearn Finance, UMA Protocol, kunye neBancor Network Token.
I-UNI okwangoku ihlawulisa isiqingatha sayo yonke ipotifoliyo, nge-49.95% yengxowa-mali ebibanjelwe kwiitoksi zomthonyama zalapha ekhaya. I-Aave iza kwindawo yesibini, ilawula i-10.25% yengxowa-mali, ngelixa ezinye iiprojekthi ze-DeFi zithatha ulwabiwo lwenani elinye kwingxowa-mali.
Ngelixa ethetha ngentsebenziswano, uMlawuli oPhetheyo wee-CoinDesk Indexes, uJodie Gunzberg, uqaphele ukuba:
“Ngokukhula kwengqwalaselo kwizinto ezintsha ngaphakathi kwezemali ezisemthethweni, kubalulekile kuluntu lotyalo-mali ukuba lube nezixhobo ezithi zibonakalise ukubonakaliswa kwale ndawo inomdla. Le ntsebenziswano inika abatyali zimali idatha kunye nezixhobo abazidingayo ukuze bafumane ukubonwa kwezimali ezisasazekileyo kwiiphothifoliyo zabo. ”
Ingxowa-mali ivulelekile kubhaliso lwemihla ngemihla ngabantu abafanelekileyo kunye nabatyali mali abamkelweyo beziko.
tags CoinDesk, Defi, IGreyyscale, iindaba
Uluhlu oluGreyili lweNgxowa-mali yalo eKhulu eyiDijithali njengeMveliso yokuNika ingxelo ye-SEC
Ukuhlaziywa: 12 Julayi 2021
Emva kokugcwalisa i-Bitcoin kunye ne-Ethereum Tr trust, iGreycale, oyena mphathi mkhulu we-asethi yemali yedijithali, idwelise ngempumelelo iNgxowa-mali yayo eKhulu yeDijithali kunye ne-SEC njengemveliso yokunika ingxelo. Umphathi we-asethi yedijithali uphinde wafaka ezinye iiNgxelo zoBhaliso ezintathu kwiqumrhu elilawulayo.
Inkampani yotyalo-mali yafaka ingxelo yokuBhalisa kwiFom 10 kwi-US Securities and Exchange Commission (SEC) ekuqaleni kwalo nyaka.
U-Grayscale ubhengeze uphuhliso lwamva kwangoko ngoMvulo, eqonda ukuba isicelo sikhuphele ukuvunywa kwaye sele sisebenza. Olu phuhliso luthetha ukuba "Ingxowa mali yokuqala yotyalo-mali yedijithali eyahlukeneyo" ngoku izabelo zayo zibhalisiwe phantsi kweCandelo 12 (g) loMthetho wokuTshintshiselana ngeziThuthi ka-1934.
Ethetha ngalo mbandela, uSekela Mongameli we-Grayscale wezoMthetho uCraig Salm uqaphele ukuba:
“I-Grayscale ijonge ukubonelela uluntu lotyalo-mali ngenqanaba eliphezulu lokuxela kunye nokwenza ingxelo ngaphezulu kwezibophelelo esele zingqongqo ezihambelana neemveliso zethu. Iimveliso zethu sizibambe zikumgangatho ophezulu kuba yile nto ifunwa ngabatyali mali kwaye sikholelwa ekubeni ibafanele. ”
I-Grayscale Okwangoku ineMveliso ezintathu zeNgxelo ze-SEC kunye nabanye abathathu endleleni
Ngeli xesha, inkampani ifake ezinye ukubhaliswa okufanayo kwi-SEC ngokumela iBitcoin Cash Trust, i-Ethereum Classic Trust, kunye neLitecoin Trust. Oko kwathethi, iGreycale okwangoku ineemveliso ezintathu ezixela kwi-SEC. Ngaphandle kokongezwa kwangoko, iNgxowa-mali eKhulu yeDijithali, ezinye iimveliso ezimbini zokunika ingxelo nge-SEC zilandelela ukusebenza kweyona mali inkulu yokugcina; I-Bitcoin (BTC) kunye ne-Ethereum (ETH).
Ngokukodwa, iFom 10 yokufayilisha yeyokuzithandela kwaye iya kuphinda ivavanywe kwaye iphononongwe yiKhomishini yoKhuseleko kunye noTshintshiselwano.
Emva kokuqhushumba kuka-2020 ukuya kwangoko ku-2021, uGreycale urekhode ukwehla kwemfuno kwiimveliso zayo. Ngokwedatha yakutshanje, iiasethi zenkampani zizonke eziphantsi kolawulo zehle ngaphantsi kweedola ezingama-30 zeerandi ngenxa yengozi yentengiso.
tags Cryptocurrency, IGreyyscale, iindaba, sec